Caalamka, 19 October 2017 page 1
Ciidamada Israel oo weeraray xarumo warbaahineed
Ciidamada Israel ayaa xalay weerar ku qaaday xarumaha shirkadaha warbaahinta Falastiiniyiinta ee Daanta Galbeed, taasi oo ay ku sheegeen howlgal looga jawaabayo hurinta rabashado ka dhan ah Israa’iiliyiinta.
Maxay Ciidanka Turkiga u Galeen Suuriya
Ciidamada milatariga Turkiga ayaa Jimcihi shalay gudaha u galay dalka ay deriska yihiin ee Suuriya, si ay goob xasaradaha ka caagan uga hirgeliyaan gobolka Idlib ee dalka Ciraq.
Xamas iyo Fatax oo Heshiis Gaaray
Kooxda Xamas ee Falastiin ayaa sheegtay inay heshiis la gaartay kooxda ay iska soo horjeedaan ee Fatax, kaasi oo ku saabsan dib u heshiisiin siyaasadeed.
London: Baabuur Dhaawacay 11 Qof
Adeegga gurmadka ee London ayaa sheegay in dadkii dhaawacmay laga daweynayo lugaha iyo madaxa, iyada oo sagaal ka mid ah cisbitaalka loo qaaday, booliiska ayaa intaas ku daray in mid ka mid ah dhaawacyadu uu aad u daran yahay.
Sacuudiga oo Is-Hubeynaya
Dowladaha Ruushka iyo Sacuudiga ayaa Khamiistii kala saxiixday heshiis dhinaca hubka ah oo ay Moscow uga iibineyso gantaalada nidaamka difaaca cirka xukuumadda Riyadh.
K.Waqooyi oo Tijaabineysa Gantaal Kale
Dowlada Mareykanka iyo khubarro kale oo caalami ah ayaa isku raacay in ay u badantahay in Waqooyiga Kuuriya ay maalmaha fooda nagu soo hayo ay tijaabin doonto gantaalkeedi ugu danbeeyay ee ah kuwa riddada dheer.
Ciidamada Ciraq oo Qabsaday Magaalada Hawija
Ciidamada Ciraq ayaa magaalada Hawija iyo xaafadaha ku hareereysan ka qabsaday kooxda Daacish, inkasta oo weli dagaalo kooban ay ka socdaan bariga iyo waqooyiga magaalada, sida ay sheegeen milatariga.
Abdulahi Sharif oo la Sheegay inuu ku Noolaan Jiray Mareykanka
Mas’uuliyiinta dalka Maraykanka ayaa sheegay in Cabdullaahi Xasan Shariif oo habeennimadii sabtidii weerar ka gaystay magaalada Edmonton ee dalka Canada kadib markii uu baabuur jiidhsiiyey shan qof, isla markaana toorriyeeyey sarkaal booliis ah uu ku noolaan jiray magaalada San Diego ee gobolka California.
London: Fal Argagax Leh oo ka Dhacay Tareen
Boqollaal ruux ayaa Isniinti shalay isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada Barcelona si ay uga madaaharaadaan gacanta adag ee ay ciidanka booliska Spain kula dhaqmeen dadki usoo baxay aftidi gooni isu taaga ee Axadi hore ka dhacay gobolka Catalonia.
Nin Soomaali ah oo lagu Tuhmayo Weerarkii Edmonton
Daacish oo Sheegatay Weerarkii Marseille
Kooxda Daacish ayaa war ay soo dhigtay wakaaladdeeda wararka ku sheegatay mas’uuliyadda weerarka.